Bruno Fernandes oo ka hadlay waxa Cristiano Ronaldo u keeni doono Man Utd | Warkii.com:-world news today for international news and videos from Europe, Asia, Africa, the Middle East and the Americas.
Home Ciyaaraha Bruno Fernandes oo ka hadlay waxa Cristiano Ronaldo u keeni doono Man...
Bruno Fernandes oo ka hadlay waxa Cristiano Ronaldo u keeni doono Man Utd
Bruno Fernandes ayaa rumeysan in imaatinka Cristiano Ronaldo ee Old Trafford ay Manchester United u soo dhoweyneyso inay ku guuleysato koobab, iyadoo Red Devils ay isku diyaarinayso soo laabashada iyo soo Celinta Premier League.
36 jirkaan ayaa go’aansaday inuu ka tago Juventus wuxuuna doortay inuu u dhaqaaqo Manchester Waxaa la siiyay ikhtiyaarka ah inuu u saxiixo kooxda ay aadka u xifaaltamaan ee Manchester City, laakiin wuxuu doortay inuu dhammaystiro Old Trafford.
Saaxiibkiis Fernandes ayaa aaminsan in Man Utd ay hadda ‘ku dhowdahay inay koobab ku guuleysato’ iyadoo uu Ronaldo dhinacooda joogo, isagoo arkay waxa uu ka qaban karo si dhow iyo shaqsi ahaanba xulka qaranka Portugal.
“Waan ognahay in xamaasaddu ay noqon doonto mid kulul, qof walba waa ogyahay in Cristiano uu joogo Halkan,” ayuu yiri Fernandes .
“Qof walba aad buu ugu kalsoon yahay uguna faraxsan yahay inuu soo laabtay, ciyaartoyguna sidoo kale. Waan ognahay waxa uu na siin karo, diiradeena, sida tan Cristiano, waa inaan badino.
“Isaga, waxaan ognahay inaan ku dhownahay inaan ku guuleysano [koobab].”
Ronaldo wuxuu hiigsan doonaa inuu maskaxdiisa guushu ku muujiso saaxiibadiisa Man Utd inteeda kale, isagoo si joogto ah kor ugu qaaday koobab intii uu xirfadiisa ku jiray.
xiddigan ayaa dhawaan u sheegay Fernandes inay ku wargaliyo inta kale ee kooxda in ay ‘u baahanyihiin ku guuleysiga Premier League xilli ciyaareedkan.
Previous articleWareysi: Xasan Sheekh oo si cajiib uga hadlay dagaalka Farmaajo iyo R/W Rooble
Next articleRa’iisul Wasaare Rooble oo xilka ka qaaday wasiirkii amniga, magacaabay mid cusub